असुरो के हो ,कसरी गर्ने प्रयोग , कस्ता रोगीहरुलाई उपयुक्त हुन्छ ? - MassiveKhabar
नेपालमा १२०० मिटर सम्मको उचाइमा पाइने असुरो वनमा पाइने जडिबुटी हो । आयुर्वेदमा यसको महत्वको विषयमा विशेष चर्चा हुन्छ ।यो औषधीय गुण भएको बुट्यान वर्गमा पर्ने वनस्पति हो। विभिन्न औषधीय गुण हुने असुरको प्रयोग गर्दा रोगीको क्षमता र मात्राको संयोजन नमिलेमा हा’निकारक पनि हुन सक्छ।असुरोको बोट बन-जंगल, धाराको छेउछाउ साथै खुल्ला ठाउँहरुमा पाइन्छ ।
यस्ता काम जुन भुलेर पनि कहिले नगर्नुहोस् जसले घरमा भित्र्याउँछ गरिबी !!